Aquamarine Shipping Co.,Ltd.
Category: အလုပ်အခွင့်အလမ်း	Published: 15 October 2011	အလုပ်အခွင့်အလမ်းများ အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ရန် ‘အခွင့်အလမ်းဂျာနယ်’မှ ကူးယူးဖော်ပြပါသည်။
Room No.503, 5th Floor, Excel Treasure Road, Shwe Gone Dine, Bahan Tsp.
Tel : 552676,552674
• Marketing Executive (Air Freight) M/F (1) Post
- Age under (30) years old
- Computer Literate & Internet, Email communication
- Minimum two years experience in related field
Application, CV, other supporting document, (2) recent photos to the above mentioned address not later than (25-10-2011) during office hours.
Minami Tours Co.,Ltd
Category: အလုပ်အခွင့်အလမ်း	Published: 13 October 2011	အလုပ်အခွင့်အလမ်းများ အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ရန် ‘အခွင့်အလမ်းဂျာနယ်’မှ ကူးယူးဖော်ပြပါသည်။
အမှတ် (၁၂-အေ)၊ တတိယထပ်၊ အနော်ရထာအိမ်ရာ၊ လှည်းတန်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။
ဖုန်း - ၅၂၆၇၀၇၊ ၀၉ ၇၃၀၈၆၄၇၆
• ခရီးသွားလုပ်ငန်းစိတ်ဝင်စားသူ ကျား/မ
- Computer, Internet, Email ကျွမ်းကျင်စွာ နားလည်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် လိုအပ်သော အထောက်အထားများဖြင့် ၂၁-၁၀-၂၀၁၁ နောက်ဆုံးထား၍ ရုံးချိန်အတွင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Choice Service Co.,Ltd
အမှတ် (၁၀၃၃)၊ ကျောက်တော်ကြီးဘုရားမှတ်တိုင်နှင့် ၁၀ မိုင်ကုန်းကြား၊ ပြည်လမ်းမ၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။
ဖုန်း - ၆၄၆၆၃၀၊ ၆၄၆၆၃၃၊ လိုင်းခွဲ (၂၀၄/၂၀၅)
• Sale & Marketing F (5) Posts
- အသက် ၂၀ မှ ၃၀ နှစ်ကြား ရှိသူဖြစ်ရမည်။
- တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
- လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံ ၂ နှစ် ရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
- ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ပြီး လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
• Computer Operator F (5) Posts
- အသက် ၂၀ မှ ၂၅ နှစ်ကြား ရှိသူဖြစ်ရမည်။
- စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
• Cashier မ (၅) ဦး
- လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၂ နှစ်၊ ဘွဲ့ရ၊ အသက် ၂၃-၃၀ အတွင်း
လျှောက်ထားလိုသူများသည် ဘွဲ့လက်မှတ်၊ သက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာ၊ အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်း၊ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူများနှင့်အတူ (၁၉-၁၀-၂၀၁၁) နောက်ဆုံးထား၍ HR Department သို့ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Trust & Development Co.,Ltd
အမှတ် (၅)၊ ဘုရင့်နောင်တာဝါ (၁)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး၊ ဆင်မလိုက် လမ်းဆုံအနီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။
ဖုန်း - ၅၀၅၁၉၁
• စတိုစာရင်းကိုင်/ ငွေစာရင်းကိုင် ကျား/မ (၂) ဦး
- ကွန်ပျူတာနှင့် စာရင်းပိုင်းနားလည်တတ်ကျွမ်းရမည်။
- လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ် ရှိရမည်။
• စာစီစာရိုက် ကျွမ်းကျင်သူ မ (၂) ဦး
• အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ ကျား/ မ (၅) ဦး
• TV/Video ပြုပြင် ကျား (၅) ဦး
• Sales & Marketing ကျား/မ (၃) ဦး
• Admin ကျား/မ (၁) ဦး
- အမှတ်စဉ်အားလုံးအတွက် ရိုးသားကြိုးစား၍ အလုပ်မရွေးသူ ဖြစ်ရမည်။
လျှောက်ထားလိုသူများသည် ကိုယ်ရေးရာဇဝင် အကျဉ်းနှင့်အတူ (၁၈-၁၀-၂၀၁၁) နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။
အမှတ် ၃၀၃၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ (စိတ်တိုင်းကျ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အနီး)၊ စမ်းချောင်း။
ဖုန်း - ၅၀၀၀၆၀၊ ၅၃၆၂၇၂
• Jewellery Designer ကျား/မ (၁) ဦး
- Photoshop ကျွမ်းကျင်ရမည်။
- ရိုးသား၍ အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်လိုသူ ဖြစ်ရမည်။ လစာကောင်းကောင်းပေးမည်။
လျှောက်ထားလိုသူများသည် ရဲစခန်းထောက်ခံစာ၊ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ၊ အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်း မိတ္တူ၊ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ဓာတ်ပုံ (၂) ပုံ၊ လိုအပ်သော အထောက်အထားများနှင့်အတူ (၂၀-၁၀-၂၀၁၁) နောက်ဆုံးထား၍ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Myint Mo Htun Company Ltd
Okapi Tarding Company Ltd.
All Best Trading Co.,Ltd
Start Prev 1234567 8910 Next End Page6of 76